ကနီမြို့နယ်မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အား ရွာသုံးရွာဒေသခံများ စုပေါင်းဆန္ဒ ထုတ?? - Yangon Media Group
ကနီ၊ အောက်တိုဘာ ၁၉
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကနီမြို့နယ် အမှတ်(၂)မဲဆန္ဒနယ်မှ တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သည် ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ပြည်သူတို့ အကြားသွေးခွဲပေးနေသည်ဟုဆိုကာ ကျေးရွာသုံးရွာမှ ဒေသခံများ က အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကနီမြို့ပေါ်၌ စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။
”ဌာနဆိုင်ရာတွေ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တာလည်းမရှိဘူး။ မီဒီယာတွေကိုလည်း ပြည်သူတွေအယုံ အကြည်မရှိအောင် သတင်းပေးနေတာ၊ ကျေးရွာတွေ စည်းလုံးမှုပျက် ပြားစေလို့ ခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပါ”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင်ပါဝင် သော ဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည်။ ကနီမြို့နယ်ရှိ ကနဲကျေးရွာ၊ မဲဒင်ကျေးရွာ၊ တောင်ပျောက်ကျေးရွာမှ အင်အား ၂ဝဝ ခန့်သည် တရားဝင်ခွင့်ပြုစာတင်၍ တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ပုံပါစာ သား၊ ဗီနိုင်းများကိုင်ဆောင်၍ ကနီမြို့တွင်း လှည့်လည်ချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
”ကနီမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုပြီး ဒေသခံတွေက ထိရောက်စွာအရေး ယူပေးရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲအပြီး မှာ အခုလို တန်ပြန်ဆန္ဒပြမှုတွေရှိလာတာပါ။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဂတိလိုက်စားကြောင်းကို ဒေသခံပြည်သူတွေက တိုင်စာတွေပို့လို့ ကျွန်တော်က သက်ဆိုင်ရာကို ပေးပို့တိုင်တန်းတဲ့အတွက် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ခုံဖွဲ့စစ်နေတယ်။ အခုပြတာလည်း ကျွန်တော့် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမကြိုက်လို့ထက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွက်ပြသလို ဖြစ်နေတယ်။ မြေနုကျွန်းကိစ္စတွေ၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနကပေးတဲ့ ရေ ပေးဝေမှုမှာငွေမသွင်းလို့ တောင်သူ ၁၃ ဦးရေပိုက်လိုင်းဖြတ်ခံရတာ စတဲ့ကိစ္စမှာ ကျွန်တော်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က ဘာမှလုပ်မပေး ဘူးဆိုပြီးပြောကြတာပါ။ အမှန်က ကျွန်တော်လွှတ်တော်မှာလုပ်ပေး တာတွေကို ရက်စွဲနဲ့အတိအကျရှိပါတယ်”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခံရသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက ပြောသည်။ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းကလည်း ကနီမြို့တွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဂတိလိုက်စားမှုအား ထိရောက်စွာအရေး ယူပေးရေးအတွက် ကနီဒေသခံများနှင့် မုံရွာမြို့ခံများပူးပေါင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ကျိုက်ကသာကျေးရွာတွင် လမ်းမြေဖို့ရန် မြေတူးရာမှ ရရှိသောရွှေပြားများအတွက် ငွေကျပ် သိန်းတစ်ေ?
အင်္ဂလန်သို့ ပြန်ကစားရန် အစီအစဉ်မရှိဟု ဆန်ချိုပြောဆို
ပြိုင်ပွဲကျင်းပချိန်တွင် အလွန်တောင့်တင်းသော အသင်းဖြစ်နေမည်ဟု ဆမ်ပါအိုလီဆို
တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင် ကလေး ၁ဝ ဦးကို ယူနန်ပြည်နယ် ကူမ